တိုက်စစ် ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် ဘယ်သူ့ကို ခေါ်ယူရမလဲ ဆိုတာ ယူနိုက်တက်ကို တွေဝေနေစရာ မလိုအောင် ရှင်းပြ လိုက်တဲ့ ဖာဒီနန် - SPORTS MYANMAR
တိုက်စစ် ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် ဘယ်သူ့ကို ခေါ်ယူရမလဲ ဆိုတာ ယူနိုက်တက်ကို တွေဝေနေစရာ မလိုအောင် ရှင်းပြ လိုက်တဲ့ ဖာဒီနန်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေ အပြောင်း အရွှေ့ တုန်းက တိုက်စစ်မှူး လူကာကူ ကို ရောင်းချ ခဲ့ပြီးနောက် တိုက်စစ်မှူး အသစ် မခေါ်ယူ ခဲ့ပဲ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစား သမားတွေ ဖြစ်တဲ့ မာရှယ် နဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့ တို့ကို နေရာပေး ကစား စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ကစားသမား နှစ်ဦးလုံး ဟာ တစ်လှည့်စီ ဒဏ်ရာ ပြသနာ ကြုံတွေ့ခဲ့ ကြတဲ့ အပြင် ခြေစွမ်း တည်ငြိမ်မှုပိုင်း လည်း အားနည်းခဲ့ ကြတဲ့ အတွက် ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်း မှာ လိုအပ်ချက် ရှိနေ ခဲ့တာ ဟာ သိသာ ထင်ရှား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ တိုက်စစ်ပိုင်း လိုအပ်ချက်ကို ခေတ္တ ဖြေရှင်း နိုင်ရေး အတွက် တရုတ် ကလပ် ရှန်ဟိုင်း ရှင်ဟွာ အသင်း မှ သက် 30 အရွယ် တိုက်စစ်မှူး အိုဒီယံ အစ်ဂ်ဟာလို ကို ရာသီ အကုန် အထိ အငှား စာချုပ် နဲ့ ခေါ်ယူ ခဲ့ ပါတယ် ။
အစ်ဂ်ဟာလို ဟာ ယခင် တုန်းက ပရီးမီးယား လိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း အတွက် 2015 ခုနှစ် မှ 2017 ခုနှစ် အထိ ပါဝင် ကစား ပေးခဲ့ ဖူးသူ တစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် အစ်ဂ်ဟာလိုဟာ ပရီးမီးယား လိဂ်ရဲ့ ပွဲဆက် ကစား ရမှု ၊ အခက်အခဲ တွေ အကြောင်း ကို ကောင်းကောင်း သိရှိ နားလည် ထားခဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် အထိ တော့ အစ်ဂ်ဟာ လိုဟာ ယူနိုက်တက် အတွက် ပုံစံကောင်း တွေကို ဆက်တိုက် ပြသ ထားနိုင်ခဲ့ ပေမယ့် သူဟာ ရာသီ အကုန် အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ယူနိုက်တက် တို့ တိုက်စစ် ကစားသမား ကောင်း တစ်ဦး ကို လာမယ့် အပြောင်း အရွှေ့ မှာ ခေါ်ယူ ရမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဗဟို ခံစစ် ကစားသမား ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ရီယို ဖာဒီနန် က လက်ရှိ အသင်း ထဲကို အတွေ့ အကြုံ ကောင်းမွန် သလို ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် မှာ လိုအပ် နေတဲ့ ကာယပိုင်း ကြံ့ခိုင်မုှ ကိုပါ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်မယ့် အစ်ဂ်ဟာလို ကိုပဲ အမြဲတမ်း စာချုပ် နဲ့ ခေါ်ယူ လိုက်တာက လက်ရှိ တိုက်စစ် ပြသနာ ကို ပြေလည် စေနိုင် လိမ့်မယ် လို့ ဆိုခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” wow ၊ ကစားပွဲ 8 ပွဲ ၊ ပွဲထွက် ကစားမှု3ကြိမ် ထဲနဲ့4ဂိုး သွင်းယူ 1 ဂိုး ဖန်တီး ထားနိုင် ခဲ့တယ် ။ အစ်ဂ်ဟာလို ၊ ခင်ဗျား သာ ဆိုရင် သူ့ကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဆီကို ခေါ်ယူ မလား ? အရင် တုန်းက တော့ ‘ ယူနိုက်တက် က အစ်ဂ်ဟာလို ကို ခေါ်ယူ လိုက်တယ် လား ? ‘ ၊ ‘ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက် နေတာ လဲ ? ‘ ၊ ‘ အိုလီ ဘာတွေ တွေးနေလဲ ‘ ဆိုပြီး လူတွေ မေးခွန်း ကိုယ်စီ ထုတ်ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် လဲ အဲ့ဒီလို မေးခွန်း ထုတ်တဲ့ သူတွေ ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကို တော့ ဝန်ခံ ပါရစေ ”
” အစ်ဂ်ဟာလို က တရုတ် မှာ ကစား နေခဲ့တာ ပါ ။ အဲ့တာ က ပရီးမီးယား လိဂ်နဲ့ အရာရာ တိုင်း ခြားနား လှတဲ့ လိဂ် တစ်ခု ပါပဲ ။ အစ်ဂ်ဟာလို ဟာ ယူနိုက်တက် အတွက် ကစား နိုင်ဖို့ ဘယ်လို အရှိန်တင် နိုင်လိမ့် မလဲ ? သူဟာ အသင်း အတွက် ကစား ပေးဖို့ အသင့်ရော ရှိနေ ပါ မလား ? ကျွန်တော် တို့က အသင်း ကို လာပြီး ချက်ချင်း အကျိုး သက်ရောက် စေမယ့် သူ တစ်ဦး ကို လိုချင် ကြတာ ပါ ။ တရုတ်ပြည် က လာပြီး ဒါကို ချက်ချင်း လုပ်နိုင် မလား ? ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာ ပါပဲ ”
” ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ အားလုံး မှားယွင်းခဲ့ ကြတယ် ဆိုတာ ကို သူဟာ သက်သေ ပြသွား ခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ကို ကြည့်ရုှ ရတာ က ယူနိုက်တက် ပရိသတ် တစ်ဦး ကို မြင်နေရ သလို ပါပဲ ။ သူဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို ရောက်ခွင့် ပိုင်ဆိုင် နိုင် ခဲ့တဲ့ အတွက် အလွန်အမင်း ကြည်နူး နေသလို ပါပဲ ။ သူဟာ ကလေး ဘဝ ကတည်းက ယူနိုက်တက် အသင်း ကို အစဉ်မပြတ် အားပေး ခဲ့သူ လေ ”
” သူ့ကို ကြည့်ရှု ရတာက ကွင်းထဲ ရှိနေ ရတဲ့ အချိန် တိုင်းမှာ အခုလို ကစားခွင့် ပေးဆောင် ခဲ့တဲ့ အိုလီ ကို ကျေးဇူး အရမ်း တင်နေ သလို ပါပဲ ။ သူဟာ ‘ ငါ့ကို ပိုင်ဆိုင် ခဲ့တဲ့ အတွက် ယူနိုက်တက် အသင်း က ကံကောင်း ရပြီ ‘ ဆိုပြီး ပြောဆို နေမယ့် ကစားသမား မျိုး မဟုတ် ပါဘူး ။ သူ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် ကစားပေး နေတဲ့ အချိန်တို အတွင်း ကျွန်တော် အဲ့တာကို သိမြင် နားလည်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ တစ်ကယ့် ကို ကောင်းလွန်း တဲ့ အရာ တစ်ခု ပါပဲ ”
” ဒီလို ကစားသမား မျိုးကို ယူနိုက်တက် တင် မဟုတ် ပါဘူး ၊ အသင်း တိုင်းက လိုချင် ကြ ပါတယ် ။ သူဟာ ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ အရမ်း ပျော်ရွှင် နေပြီ ‘ ခင်ဗျား ဘာကို ဖြစ်စေ ချင်လဲ ဆိုတာ ကိုသာ ပြောပြ လိုက်ပါ ‘ ဆိုပြီး ကွင်းထဲ ဝင်ရောက် အစွမ်းကုန် ပေးဆပ် ၊ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ကစားပြ သွားမယ့် ကစားသမား မျိုး ပါပဲ ။ သူဟာ အသင်း ကို ချစ်တဲ့ အတွက် လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းမှာ သာမက ပွဲစဉ် မှာပါ စွမ်းနိုင် သမျှ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ပေးမယ့် ကစားသမား ပါပဲ ”
” သူ ယူနိုက်တက် မှာ လုပ်ပြ ခဲ့တာ တွေက ရှော့ခ် ရချင် စရာ ပါပဲ ။ နားထောင် ၊ သူက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ဟာ အသင်း တိုင်းကို အနိုင်ယူ ကျော်ဖြတ် ပြနိုင်မယ့် အသင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ပေး နေတာ မဟုတ် ပါဘူး ။ ယူနိုက်တက် အသင်း ဖက်က သူ့လို ကစားသမား မျိုး ၊ သူ့လို စိတ်ထား မျိုးကို လိုအပ် နေတာ ပါ ။ သူဟာ အသင်းက ညွှန်ကြား ပေးတဲ့ အရာရာ တိုင်းကို လုပ်ဆောင် ပြဖို့ အမြဲ အဆင်သင့် ပါပဲ ”
” သူဟာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ အမြဲတမ်း ကစားသမား ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက် တဲ့ အာမခံချက် ပေးဆောင် နိုင်သူ တစ်ဦး ပါပဲ ။ သူဟာ ဘောလုံး ကို ကိုင်ဆောင် ကစား နိုင် သလို ပြိုင်ဖက် ကစားသမား တစ်ဦး ၊ နှစ်ဦး ကို ဒုက္ခ ပေးစွမ်း နိုင်တဲ့ ကာယပိုင်း ကြံ့ခိုင်မုှ ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန် ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ အဲ့ဒီလို ကစားသမား မျိုး မရှိ ပါဘူး ။ သူဟာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ အချိန် မှာတောင် အသင်းဖော် တွေ ဂိုးသွင်း နိုင်ဖို့ ဘောလုံး ထိုးပေး နိုင်သူ တစ်ဦး ပါပဲ ”
” အကယ်လို့ ရပ်ရှ်ဖို့ သာ ပြန်လည် သက်သာ ကောင်းမွန် နိုင်မယ် ဆိုရင် သူဟာ အစ်ဂ်ဟာလို လို ကစားသမား မျိုးကို လိုအပ် နေပါ လိမ့်မယ် ။ အစ်ဂ်ဟာလို ဟာ ရပ်ရှ်ဖို့ ၊ မာရှယ် နဲ့ ဂျိမ်းစ် တို့ အပေါ် အကျိုး သက်ရောက် မှု ပေးစွမ်း နိုင်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ။ ဒါက ဝိန်း ရွန်းနီ ၊ လူးဝစ် ဆာဟာ တို့ အပေါ် ဟင်းနရစ် လာဆင် ရဲ့ အကျိုး သက်ရောက် ခဲ့ပုံ နဲ့ ဆင်တူ နေတာ အမှန် ပါပဲ ” လို့ ဖာဒီနန် က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။